Thola ukuthi ingubo yendabuko injani eNdiya | Izindaba Zokuhamba
USusana Garcia | | Cultura, General, India
Lapho sivakashela kwamanye amazwe ane- isiko elihluke ngokuphelele kwesethu sithanda ukubona konke, ngoba iyashintsha kusuka ku-gastronomy iye ekusebenziseni nasemasikweni noma ezingutsheni. Namuhla sizokhuluma ngezingubo eNdiya. Yize kulezi zinsuku emazweni amaningi ungabona izingubo ezifanayo ngenxa yokuhwebelana kwembulunga yonke, iqiniso ukuthi ezindaweni eziningi amasiko athile asalondoloziwe ngemvunulo ejwayelekile kanye nezicucu ezithile eseyingxenye yesiko labo.
I-Los imvunulo ejwayelekile imele kakhulu isiko lendawo ngayinye futhi yingakho sithola izingubo zamaNdiya njengezinto eziyingxenye yesiko lawo. Sizobona okunye ngalolu hlobo lwezingubo ezisetshenziswa empilweni yansuku zonke noma ezisetshenziswe emicimbini nasemicimbini ekhethekile.
1 Ukuhambela e-india
2 Izingubo zabesifazane eNdiya
3 Izingubo zamadoda eNdiya
Uma siya eNdiya, njenganoma iyiphi enye indawo, kungadingeka sijwayele kancane amasiko abo. Izingubo zimibalabala ngempela futhi sizobona izindwangu eziningi ezingakholeki ezigcwele imininingwane, nezindwangu ezilula. Kuyinto ezoheha ukunakwa kwethu. Kepha futhi kubalulekile ukuzivumelanisa nalokho abakujwayele. Ngokuvamile, akujwayelekile ukuthi abesifazane bakhombise ngokuphelele imilenze noma amahlombe abo, ngakho-ke kungcono njalo ukugqoka izingubo ezihlakaniphile ezinamahembe amboze amahlombe noma mhlawumbe isikhafu uma kungenzeka sizivumelanise nokuzimboza. Uma sihlonipha amasiko abo, ukuvakashela eNdiya ngokungangabazeki kuzoba lula kakhulu futhi sizokuthokozela kakhulu.
Izingubo zabesifazane eNdiya
ENdiya kukhona okokugqoka okuyisici esivelele futhi ngokuqinisekile isari evamile yabesifazane ifika engqondweni. Lokhu nakanjani yi ingubo eyaziwa kakhulu futhi esetshenziswa ngabesifazane baseNdiya ngendlela yesiko. Yindwangu elinganisa ngamamitha amahlanu ubude no-1.2 ububanzi. Le ndwangu inxeba elizungeze umzimba ngendlela ethile, kwakheka ingubo. Ungafaka futhi i-blouse nesiketi eside esibizwa nge-peikot. Lezi yizembatho esizozibona kakhulu futhi ngokungangabazeki esizothanda. Imiklamo nemibala yayo ayipheli futhi ingashintshwa ngezikhathi ezahlukahlukene kuye ngekhwalithi yezindwangu noma amaphethini wazo. Kukhona izivakashi eziningi eziza ukuthenga isari enhle njengesikhumbuzo.
Enye ingubo leyo esetshenziswa abesifazane baseNdiya yiSalwar kameez. ISalwar yigama elinikezwe amabhulukwe abanzi alingana emaqakaleni futhi ayingubo entofontofo impela. Lolu hlobo lwamabhulukwe lwaze lwaduma eminyakeni edlule kusiko lethu. Imvamisa zisetshenziswa ezindaweni lapho kwenziwa umsebenzi onzima njengasezintabeni futhi kuyingubo efanele amadoda. Kuhlanganiswa ibhulukwe elinemikhono emide elifinyelela emadolweni. Ngokuvamile, lezi zingubo zivame ukuhamba ngokufana nesari.
Izingubo zamadoda eNdiya
Emadodeni kukhona ezinye izingubo ezijwayelekile ezifana nedhoti. Leli yibhulukwe elimhlophe elihle kakhulu eliqukethe indwangu engunxande yobude besareyi cishe futhi egoqelwa okhalweni, idlule emilenzeni iphinde ilungiswe okhalweni. Inethezekile futhi ilula futhi imvamisa imhlophe ngombala, yize kukhona neminye imibala efana nokhilimu. Yize ithwalwa kulo lonke elaseNdiya ijwayelekile kakhulu ezindaweni ezifana nezwe laseBangal.
Enye yezingubo okujwayelekile eNdiya kwabesilisa yi-kurta. I-kurta nayo igqokwe ezindaweni ezinjengePakistan noma iSri Lanka. Yishethi elinde eliwela emadolweni noma ngisho nangaphansi kancane. Kwesinye isikhathi abesifazane bayayigqoka, yize inguhlobo olufushane futhi inezinye izindwangu ezinemibala eminingi noma ngamanye amaphethini, ngoba imvamisa basebenzisa amaphethini amaningi ezimbali. Le kurta ingagqokwa ngokwesiko ngamabhulukwe e-salwar noma i-dhoti.
Kukhona izingubo ezingajwayelekile futhi ezingasetshenziswa ngokufanayo kuyo yonke indawo, njengoba kwenzeka nge-lungui, esizoyibona njengesiketi eside siboshwe okhalweni. Lesi siqeshana singasetshenziswa ngezindlela ezahlukene futhi kuya ngendawo esigqokwa ngabesilisa, abesifazane noma bobabili. Isibonelo, ePanjab ziyizicucu ezimibalabala futhi zingagqokwa abesilisa nabesifazane, eKerala kunesici esikhethekile sokuthi siboshwe ohlangothini lwesokunene futhi zombili zigqokile futhi ezindaweni ezinjengeTamil Nadu kuphela amadoda azigqokayo futhi aboshwe ohlangothini lwesobunxele. Ucezu lukakotini futhi kuya ngendawo lungaba futhi kumbala owodwa noma lube namaphethini nemibala ehlukile.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Izingubo zamaNdiya
Ungagqoka kanjani eMorocco